“Tsy Miresaka Afa-tsy Politika” Sisa Ilay Blaogera Krimeana Ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
“Tsy Miresaka Afa-tsy Politika” Sisa Ilay Blaogera Krimeana Ankehitriny
MpanoratraDaniel Alan Kennedy
Voadika ny 06 Septambra 2014 17:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, English
Georgiy Sedelnikov. Sary avy amin'ny strajj.livejournal.com.
Ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny famakafakana mivelatra momba ny tontolon'ny blaogy mpiteny Rosiana ao Okraina Atsinanana tontosain'ny RuNet Echo. Fakafakao manontolo ny andian'antsafa ao amin'ny pejin'ny Eastern Ukraine Unfiltered.
Toy ny blaogera tsotra rehetra ihany ity Krimeana mpiseraseran'ny Livejournal ity, saingy lasa heniky ny heviny momba ny politika, media ary ny fifanandrinana ankehitriny ny blaoginy.
Tsy mba mpiresaka politika mihitsy i Georgiy Sedelnikov, 30 taona teraka tao Sevastopol. Na dia liana tamin'ny resaka politika aza i Sedelnikov, izay mamahana pejy LiveJournal amin'ny anarana Strajj, dia resaka fakana sary ny natiora, kolontsaim-bahoaka, tantara mampihomehy avy ao amin'ny internet, ary ireo lanonana ao amin'ny tanindrazany no tena anehoany hevitra. Tsindraindray tadiavina ihany izy no maneho hevitra politika ao Rosia, Okraina ary avy amin'izao tontolo izao.
Niova izany nanomboka ny Desambra 2013, rehefa nanomboka nahazo vahana ny fihetsiketsehana Euromaidan. Nanomboka teo ny blaogin'i Sedelnikov dia saiky tsy niresaka afa-tsy politika sy fifandonana. Blaogera mazoto manoratra i Sedelnikov ary imbetsaka izy no mamoaka ny heviny ao anatin'ny iray andro.
Nisintaka tamin'ny fihetsiketsehana Euromaidan hatramin'ny voalohany ny fijerin'i Sedelnikov, tamin'ny namoahany lahatsoratra blaogy tamin'ny 24 Novambra mitondra ny lohateny hoe “F*ck this E€uromaidan.” (Ompaiko ity €uromaidan ity).
Мне жалко людей которые реально верят,что Европа поможет.Люди выж поймите Европа это организм который питается странами такими как Украина.И ещё хочу сказать, как вы можете слушать Кличко и верить ему который налоги платит в Германии
Miala tsiny amin'alahelo indrindra amin'ireo olona izay mino an'i Eoropa fa hanampy aho. O rey olona ô, aoka ho takatrao fa fikambanana minono amin'ny firenena tahaka an'i Okraina izany Eoropa izany. Tiako ihany koa ny milaza, ahoana no ahafahanao mihaino [ilay mpanao ady totohondry lasa politisiana Vitali] Klitschko ary matoky azy nefa any Alemaina no andoavany ny hetrany.
Tsy afa-nanala velively ny ahiahin'i Sedelnikov momba ny Maidan ny toe-javatra rehetra nanaraka, nanazava izy :
Раньше я не писал о политике так много,но после киевских событий,я стал писать только о политике.Главное,что послужило писать о политике это одностороннее враньё со стороны Киева,и я вещаю другую точку зрения,можно сказать я один из тех кто хочет прорвать информационную блокаду.
Taloha aho tsy mba mpiresaka politika loatra, fa taorian'ny toe-javatra nitranga tao Kiev, dia lasa tsy niresaka afa-tsy politika aho. Ny antony lehibe nahatonga ahy tsy hanoratra afa-tsy politika dia noho ny tsy fisian'ny hevitra mivoaka afa-tsy ny avy ao Kiev. Mampiseho fijery hafa aho. Ho afa-miteny ny tsirairay fa iray amin'ireo mamaky ny barazin'ny fanakanana vaovao tsy hivoaka aho.
Raha nanontaniana momba ny fijoroana ara-politikana misy azy i Sedelnikov dia nanambara fa : “Tsotra ny fijeriko, manohana ny rariny aho ary manohitra ny fasisma.” Ny famakiana tsipalotra amin'ny blaoginy no ahafahana manondro fa manohana ny politika ivelan'i Rosia izy ary miahiahy fatratra ireo liberaly Tandrefana sy Rosiana. Tsy mahagaga izy raha tena mpanohana mavitrika amin'ny “fanakambanana” an'i Krimea tanindrazany amin'ny Federasiona Rosiana sy manohana ireo mpiady mpisintaka ao Luhansk sy Donetsk miady amin'ny “jadona.” Tsy mahita izay mety isian'ny fampihavanana izy eto amin'ity teboka ity. “Efa maro loatra ny maty eo amin'ny andaniny sy ny ankilany.”
Tsy matoky ireo gazety be mpakay i Sedelnikov, tahaka ireo blaogera maro hafa ao Krimea.
Весь кризис и конфликт на Украине показал полный не профессионализм всех украинских СМИ ибо они не показывают новости,а они вещают сплошную пропаганду и враньё.Враньё украинских СМИ я ощутил на себе ещё когда был кризис и сопротивление в Крыму.
Ny krizy iray manontolo ao Okraina dia mampiseho ny tsy fahaiza-miasan'ny fampitam-baovao Okrainiana rehetra ary ny zavatra atolotry ry zareo dia tsy vaovao fa propagandy sy lainga ranoiray. Niaina izany laingan'ny fampitam-baovao Okrainiana izany aho raha nisy krizy sy fijoroana teto Krimea.
Raha tokony hatoky ny media, dia nanolo-kevitra tamin'ny olona “mitady vaovao tsy mitongilana dia vakio ny media sosialy” i Sedelnikov ary nanamarika fa na izy tenany aza dia misafidy ny hitoky loharanom-baovao avy amin'ny olon-tsotra amin'ny votoatim-baovao ampiasainy. Na izany aza dia nanamarika izy fa “tsorina, fa amin'izao fotoana izao, tsy misy fitongilanana, ny media rosiana no mijery mahitsy sy demokratika kokoa.”
Nahatonga an'i Sedelnikov ho maro fahavalo ny fomba fijery, ary ao anatin'izany, araka ny nolazainy, ireo ao amin'ny raharaham-pilaminana sy fiarovana okrainiana, izay efa nanara-maso azy taloha. “Efa nandray anjara tamin'ny fihetsiketseha-panehoan-kevitra maro aho ary arahin'ny SBU (Sluzhba Bezpeky Ukrainy, sampam-pitsikilovana okrainiana) maso hatrany ireo mpandray anjara amin'izany.” Nitantara i Sedelnikov fa efa voarahona tamin'ny fitoriana eny amin'ny fitsarana izy tamin'ny fanohanana ny fisintahana ary efa nahazo fandrahonana maro avy amin'ny olon-tsy fantatra izy sy ny fianakaviany, na izany tamin'ny alalan'ny mailaka na izany tamin'ny alalan'ny famoahan-kevitra ao amin'ny pejy LiveJournal.
Ещё незадолго до сопротивления в Крыму я попал в расстрелянный список блогеров несогласных с майданом этот список мне присылали,но может он и не был столь серьёзным,но слава богу это я не проверил.
Talohakelin'ny niadian'i Krimea [tamin'i Kiev] dia tafiditra ao anaty ny lisitry ny blaogera tsy nankasitraka ny Maidan aho ary nalefa tamiko izany lisitra izany. Angamba tsy tena matotra sy mampatahotra be izany fa soa ihany fa tsy hita mihitsy aho.
Sedelnikov no ohatra velona amin'ny vokatry ny fifanandrinana ao Okraina amin'ny blaogera maro, tahaka an'i Colonel Cassad. Taloha moa izany raha liana amin'ny fizarana izay mahaliana sy votoaty mampiala voly i Sedelnikov, fa tsindraindray ihany no mba niresaka ny tontolo politika, ankehitriny ny blaoginy dia miompana manontolo amin'ny fitantarana ny ady ao Okraina Atsinanana sy ny fifanenjanana eo amin'i Okraina sy i Rosia.
2 andro izayRosia
Nobahanan'ny mpanao sivana aterineto Rosiana ny tranonkalan'ny Ekipa Navalny
4 andro izayRosia
Mitaky ny fanivanan-tena avy amin'ireo sehatra media sosialy ny lalàna Rosianina vaovao
2 herinandro izayRosia
05 Jona 2020Azia Atsimo
Soa ho an'ireo Nepaley mpaka sary ny voahary ny fiverenan'ireo vorona mandritra ny fihibohana noho ny COVID-19